တောင်ငူမြို့နေ ကဗျာဆရာကြီး မောင်နီမွန် (၇၅)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ နေအိမ်၌ ပြုလုပ်မယ် K (မိုးမခ) ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၈ ကဗျာဆရာကြီးမောင်နီမွန်ရဲ့၇၅ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မင်္ဂလာပွဲကို ဇွန်လ၂ရက်(စနေနေ့) တောင်ငူမြို့ဆရာဖြေလမ်းနဲ့ဈေးလမ်း ထောင့်ရှိ နေအိမ်မှာ မနက်၆နာရီကနေ နေ့လယ် ၁၁ နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါ မွေးနေ့ပွဲမှာ သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အား မနက် ၆ နာရီတွင် အရုဏ်ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး ဖိတ်ကြား ထားသော ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာ၊ ပန်းချီဆရာများနဲ့ ကဗျာရွတ်မယ့်အစီအစဉ်လည်းပါဝင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကဗျာဆရာ မောင်နီမွန် ၁၉၄၃၊ ဇွန်-၁ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားပြီး အမည်ရင်း ဦးတင်လှိုင်၊ ၁၉၅၈ ဟံသာဝတီသတင်းစာ ကျောင်းသားကဏ္ဍတွင် ပထမဦးဆုံးကဗျာဖြင့် ကဗျာလောကသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၁-၆၄ တောင်ငူကဗျာဆရာအသင်း အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး လီနင်ကဗျာစာအုပ်၊ခေတ်ရေစီး၊ မာယာ...
မောင်မောင်စိုး – NCA ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ၂၁ ရာစု ပင်လုံ တတိယညီလာခံ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၈ NCA ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ NCA-S EAOs များ၏ ၂၀ ကြိမ်မြောက် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင် အဖွဲ့ PPST အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၇ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုအစည်းအဝေး အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ သည့် KNU ဥက္ကဌ စောမူတူးစေးဖေါ က အောင်မြင်သော ငြိမ်းချမ်းရေး အခြေပြု နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် တဘက်နှင့်တဘက် ကြိုတင်စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များမထားရှိဘဲ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေ့ရှု ဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင်...
စိုင်းလျန်း (Sai Leang) – “RCSS/SSA အပစ်ခတ် ရပ်ပြီးပြီလား” မိုးမခ၊ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၈ (NCA လက်မှရေးထိုးထားသော RCSS/SSA နှင့် တပ်မတော်တို့ကြား တိုက် ပွဲများ ဖြစ်ပွါးနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍၎င်း သဘောတူထားသော စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍ မတူကွဲလွဲသော နားလည်မှု များနှင့်ပတ်သက်၍၎င်း လက်ရှိ JMC တွင် တာဝန်ယူနေသော RCSS ကိုယ်စားလှယ်တဦး၏ အမြင်အား ဝေဖန်ပိုင်းခြားသုံးသပ်နိုင်ပါရန် ဖေါ်ပြပါသည်။ စာရေးသူ စိုင်းလျန်း Sai Leang ၏ အာဘော်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဘက်အားလုံး၏အခြေအနေနှင့်အမြင်များအား ထည့်သွင်း သုံးသပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ (ဆောင်းပါးကို မျှဝေပေးသူ စာရေးဆရာ မောင်မောင်စိုး မှတ်ချက်)) အပိုင်း (၁)...
ကာတွန်း JOKER ရဲ့ လွတ်တော့မယ်ကွ … လွတ်တော့မယ် (မိုးမခ) ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း Joker Related posts ကာတွန်း ဂျိူကာ – ပြောင်းဖို့တော့ လုိုနေပြီ (0) ကာတွန်း ဂျိူကာ – ဖေ့စ်ဘွတ်ထဲမှာ (ဟိုလူကြီးတွေ) ကို ထားရစ်ခဲ့ (0) ကာတွန်း ဂျိူကာ – အရှုပ်ထဲမှာ ရှင်းအောင်နေ (1) ကာတွန်း ဂျိူကာ – သိတယ် (0) ကာတွန်း ဂျိူကာ – ယုံစောင့်ဥပဒေ ဆိုပါလား … ဟိတ် (0)
လူနှင်းချို (မတ္တရာ) ● ​ခြေလက်​များ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၈ လက်​နှစ်​ဖက်​ကိုဖြုတ်​ပြီး ​ခြေ​ထောက်​​နေရာတပ်​​ထားတဲ့သူ​တွေက ​ခြေ​ထောက်​နှစ်​ဖက်​ကိုလည်း လက်​​နေရာတပ်​ထားကြတယ်​ အ​ပြောင်းအလဲက ဆန်းကြယ်​ သွားသွားလာလာပါပဲ ဟန်​ချက်​ညီ​နေတာပါပဲ တစ်​ခါတရံ​တော့ အမြင်​ရိုင်းတာ​လေး​​​တွေက ဝင်းဝင်းပပ ​ခြေ​ထောက်​​တွေနဲ့ လက်​မှတ်​ထိုးပြီး လက်​​တွေနဲ့ ​ခြေခလိန်​ထိုး​နေကြတယ်​။ ။ ​ခြေ​ထောက်​​တွေက ​ဘောပင်​မကိုင်​တတ်​ဘူး ​ခြေ​ထောက်​​တွေက မိုက်​ကရိုဖုန်းမကိုင်​တတ်​ဘူး ​ခြေ​ထောက်​​တွေက သွားကြားမထိုးတတ်​ဘူး အဆိုးဆုံးကေ​​ခြ​ထောက်​​တွေဟာ လက်​မှတ်​မထိုးတတ်​ဘူး။ Tags: လူနှင်းချို (မတ္တရာ) Related posts လူနှင်းချို (မတ္တရာ) ● နိုင်ငံ​တာ်​ ဓာတ်​စာ (0)
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းကြားက ဖယောင်းတိုင် – အပိုင်း (၁၀) (မိုးမခ) ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၈ တိဗက်လူမျိုးများ အများအပြားရှိရာ ဓရံဆာလာမှာ နေခဲ့ရသည့်အချိ်န်တွေက သူ့ဘ၀ မှာ မှတ်မှတ်ရရရှိလွန်းလှသည်။ ဓရံဆာလာက လွတ်လပ်သည်။ အေးချမ်းမှု အပြည့်ရှိသည်။ ရာသီဥတုကလည်း ကိုယ့်ဘက်မှာရှိသည်။ အဲသည်အချိန်တွေ တုန်းကတော့ တိဗက်တွေနဲ့ တရုန်းရုန်း။ ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားရဲ့ သက်တော် ၇၈ နှစ်မွေးနေ့ပွဲတုန်းက တိဗက်တွေနဲ့အတူ လူတွေကြားထဲ တိုးဝှေ့ပြီး စတုဒိသာတွေ တိုးစားခဲ့ရတာကိုလည်း မှတ်မိနေသေးသည်။ ငယ်ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီထဲကလို “ဒီနေ့ ဘုရားသွားပြီး ဆွမ်းတော်ကြီးတင်စွန့်တာ သွားတိုး။ ငှက်ပျောသီးနှစ်လုံးရ။ တံတောင်နဲ့တွက်မိလို့ ထိပ်ကြီး ဖုသွား” ဆိုတာမျိုး တော့...
မော်လေး ● ဗဟိုအစိုးရမီးစိမ်းပြလျှင် ကျောက်မီးသွေး စီမံကိန်းစမည် (မိုးမခ) မေ ၃၁၊ ၂၀၁၈ (ဘားအံ) — ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့ ကျောက်မီးသွေးလောင်စာသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်းစတင်ရန် ပြည်ထောင် စုအစိုးရထံမှ ခွင့်ပြုချက်စောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်က မေ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ပြောသည်။ “ပြည်ထောင်စုကနေ လောလောဆယ်မှာတော့ ဆွေးနွေးနေဆဲလို့ပဲ ကျွန်မတို့ သိရတယ်။ တကယ်လို့များ ပြည်ထောင်စုက မီးစိမ်းပြလိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်းလုပ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ စီစဉ်နေတာတွေတော့ရှိတယ်” ဟု ဝန်ကြီးချုပ်က ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။ ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံးပြီး မီဂါဝပ် ၁,၂၈ဝ ထုတ်လုပ်မည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပတ် သက်ပြီး နေပြည်တော်က တရားဝင်ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးပေ။ မေ ၂၉...
ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ အမြင့်ရောက်လေ .. လေပိုတိုက်လေ … (မိုးမခ) မေ ၃၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ကိုတေ Related posts ကာတွန်း ကိုတေရဲ့အတွေး (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ နေရာယူတတ်သူ (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ ထမ်းနိုင်တုန်းလေး ထမ်းခွင့်ရတာ (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ စင်ကာပူကို ကျော်ရမည် … (0)
မြဇင်ယော် ● မခမ်းသောမြစ်ရဲ့ချိုတေးများ (မိုးမခ) မေ ၃၁၊ ၂၀၁၈ (၁) “ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနဲ့ထုတ်တဲ့သူတွေကရော ဒီနေရာမှာပဲ ထုတ်ရမှာလားရှင့်” မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ တပ်ကုန်းမြို့၊ ပင်စင်စားတွေ တန်းစီစောင့်နေတဲ့ကောင်တာကို သွားမေးကြည့်ရတယ်။ ရွာမှာနေတဲ့ မိသားစုပင်စင်စား အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ် အမေကြီးက မြို့ကိုလာရတာခက်လို့ မလာနိုင်။ မြေးဖြစ်တဲ့ကျွန်မက ကိုယ်စားထုတ်ပေးရမယ်။ “ဟုတ်ပါတယ်။ ပင်စင်စားက ဘာလို့မလာနိုင်တာလဲ ခင်ဗျာ” “ရွာကလာရမှာ၊ ခရီးဝေးလို့ပါ” “ခင်ဗျား အမြဲတမ်းထုတ်ပေးမှာလား” “ဟုတ်ပါတယ်” “ခင်ဗျာနာမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ နေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံပေးပါ၊ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာရော” ကွန်ပြူတာနဲ့ စာရင်းသွင်းနေတာက်ို စောင့်နေလိုက်ရတယ်။ ပြီးမှ ချလံလေးပေးပြီး “ရပါပြီခင်ဗျာ၊ ငွေထုတ်ကောင်တာကိုသွားပါ” ကောင်တာရှေ့ရောက်တော့ စာရွက်တွေ အထပ်လိုက်ကြီး။ တော်တော်ကြာစောင့်ရဦးမယ်ဆိုတာ သိလိုက်တယ်။ ပင်စင်စား တွေမှ...
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● လျှပ်စစ်ဓါတ်အား (အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း) (မိုးမခ) မေ ၃၁၊ ၂ဝ၁၈ အခုချိန် မိုးကျလာချိန် မုန်တိုင်းများနဲ့ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား၊ တာဝါတိုင်၊ ဓါတ်တိုင်များ လဲကျပျက်စီးနေလို့ လူတွေသေကြေတယ်၊ ပစ္စည်းတွေ ဆုံးရှုံးတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ကန်ထရိုက်တာများရဲ့ ဝိသမ အရည်သွေးနိုမ့် ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘတ်ဂျတ်မှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ၂၄ ရာခိုင်နှုန်း (ကန်ဒေါ်လာ ၅ ဘီလျံအထက်) အသုံးပြုနေလို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း ဘတ်ဂျတ်ထက် အများကြီး သာလွန်ပါ တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အညှီရှိရာ ယင်အုံဆိုစကားအတိုင်း ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်းတွေမှာ ကုမ္ပဏီကောင်းတွေ၊ ကုမ္ပဏီဆိုး တွေ အများကြီးစုပုံနေသလို...
ကာတွန်း KZZH ရဲ့ ဦးလေးကြီး ရှင်းပေးခဲ့ပါ … (မိုးမခ) မေ ၃၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း - KZZH Related posts ကာတွန်း KZZH- အသံက မတိတ်နိုင်သေး (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းသူတွေ … (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ပြောထားပြီးသားနော် … (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ မေကြီးကယ်ပါ (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ပျောက်သောသူ (0)
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင်း (၇၅) (မိုးမခ) မေ ၃၁၊ ၂ဝ၁၈ ● ပန်ကော် – ချို့စွေတိုက်ပွဲ (ပန်ကော် – ခြူးရွှေတိုက်ပွဲ) ပန်ကော် – ခြူးရွှေတိုက်ပွဲအား CPB မှ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်ကျော်ဇော (ရဲဘော်သုံးကျိပ်) နှင့် ဦးထွန်းလွင်ခေါ် ဗိုလ်ရဲဒင် (အရှေ့မြောက်စစ်ဒေသ) တို့မှ ဦးစီးသည်။ ပန်ကော် – ခြူးရွှေတိုက်ပွဲတွင် CPB ဘက်မှပါဝင်သော တပ်ရင်း တပ် ဖွဲ့များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ တပ်မဟာအလိုက်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ တပ်မဟာအသီးသီးမှ တပ်ရင်းများ ထုတ်နုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပန်ကော် – ခြူးရွှေ စစ်မြေပြင် ရင်း၅ဝ၁၊ ရင်း...
ကာတွန်း ညီပုချေ – လူကိုမကြည့် ပါတီကိုကြည့်တာပါ (မိုးမခ) မေ ၃၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီပုချေ Related posts ကာတွန်း ညီထွေး – ခေတ်သစ် ဝေါဟာရများ (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းနေသူတွေ … (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ လေထဲပျောက်ကုန်ပါဦးမယ်ကွာ …. (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ တွေ့ပြီပေါ့ကွာ … (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ အတိုးနည်းအိမ်ယာမဟုတ်ရပါ (0)
သွန်းခ – ဇာတ်ညွှန်းခွဲမထား (မိုးမခ) မေ ၃၁၊ ၂၀၁၈ မေ၂၉၊ ညနေ။ မြောက်ဥက္ကလာကနေ ဝိုင်ဘီအက်စ် ၃၆ စီးပြီး ဆူးလေကိုထွက်ခဲ့တယ်။ ကလေးတွေအတွက် ကဗျာရွတ်ပွဲသွားနားထောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပေါ့။ စိတ်သာကူးတာ၊ စိတ်ရှုပ်စရာက ကားပေါ်မှာပါလာတယ်။ ပေစုတ်စုတ်နဲ့ ၁ဝ နှစ်သားလောက်ကောင်လေးက ပိုက်ဆံလာတောင်းလို့။ ဘယ့်နှယ်ကားပေါ်မှာ ကွယ်။ သကောင့်သားလေးက မြောက်ဥက္ကလာအဝိုင်းမှတ်တိုင်ကတည်းကတက်လာတာ။ ကားခပေးစီးတယ်။ သံဖြူပုံးခပ်ရှည်ရှည်ထဲ နှစ်ရာတန်အသစ်ကလေး ထည့်လိုက်တာမြင်သားပဲ။ သူကိုင်ထားတဲ့ ကိုလာပလတ်စတစ်ပုလင်းထဲကထုတ်ပေးလိုက်တာ။ ပုလင်းခွံကိုပိုက်ဆံဗူးလုပ်ထားတာကမှ မိုးလုံဦးမယ်။ အဲဒီနေ့ရန်ကုန်က မုန်တိုင်းအရှိန်နဲ့ မိုးသည်းသည်းမှာလူတွေက ခပ်ရွှဲရွှဲကိုး။ ကောင်လေးကိုယ်ကနံလိုက်တာ ဖိနပ်လည်းမပါဘူး။ တကယ့် ပေစုတ်စုတ်။ ဆိုးတာကကားပေါ်ကလူတွေဆီ လက်လိုက်တို့ပြီး ပိုက်ဆံတောင်းနေလိုက်တာ။ မိုးသည်းသည်းမို့ထင်တယ်။ ကားကလည်းချောင်ပါ့။ ကောင်လေးက ထီးဂေါက်နဲ့။ ကလေးကိုး၊ ဆော့နေတာပေါ့။ မှတ်တိုင်ကလူတွေတက်လာတဲ့အခါ ခဏနားတယ်။...
ကိုအောင်မှိုင်း – ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက် မြန်မာ့တပ်မတော်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား – အပိုင်း ( ၂ ) (မိုးမခ) မေ ၃၁၊ ၂၀၁၈ ၁၉၆၂ခုနှစ်မတ်လ (၂)ရက်မှာတော့ ဗိုလ်နေ၀င်းဦးစီးပြီး စစ်တပ်က ပြောင်ပြောင်းတင်းတင်းဘဲ အာဏာသိမ်းခဲ့တော့တာ ပါဘဲ။ အာဏာသိမ်းကြေငြာချက်ကတော့ မနက်(၈)နာရီ(၂၅)မိနစ်မှာ “နိုင်ငံတော်အာဏာကို ဗမာ့တပ်မတော်မှ တာဝန် ယူစောင့်ရှောက်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း” ဗိုလ်နေ၀င်းက မြန်မာ့အသံက ကြေငြာလိုက်တာဖြစ်ပြီး မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကို စစ် ကြေငြာလိုက်တာလဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမနက်မှာဘဲ တော်လှန်ရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းကြောင်း မြန်မာ့အသံကဆက်ကြေငြာခဲ့ က စစ်ဗိုလ် ၁၇ ဦးနဲ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက် အစိုးရအဖွဲ့ကို ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။မတ်လ ၃ ရက်နေ့ ရောက်တော့ ပြည်နယ်ကောင်စီတွေဖျက်သိမ်းပြီး ပြည်နယ်ဦးစီးအဖွဲ့တွေပြန်ဖွဲ့ခဲ့တယ်။အဲဒီနေ့မှာဘဲ ပြည်သူ့လွတ်တော်နဲ့ လူမျိူးစုလွှတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် ပါလီမန်ဟာ လုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ထူးခြားတဲ့ကြေငြာ ချက်တခုကို...
မိုးခါး – ကောက်စိုက်တေး
KT# ကောက်စိုက်တေး မိုးခါး (မိုးမခ) မေ ၃၀၊ ၂၀၁၈ မိုးမြင်မှ ထယ်သွားပြင်ရတယ်လို့မဆိုလိုဘူး မြှုပ်နေတဲ့ကန်သင်းရိုးနဲ့ ပျောက်နေတဲ့နွားသိုးနဲ့ ဘဝမီးဖိုချောင် ရေယိုတာလည်းတဒုက္ခ ပြန်မရသေးတဲ့ယာနဲ့ ပြန်ရလိုက်တဲ့ယာတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ဓာတ်မြေသြဇာနည်း နည်းထည့်သုံးတော့လည်း အတိုးသာတက်လာတယ် လူမွေးပြောင်တဲ့ခေတ်ရောက်မလာတော့ ကောက်စိုက်တံကိုင်တဲ့လုံမငယ်လည်း ကမ္ဘာမကြေဘူး သီချင်းအလွတ်ရနေပြီ။ ။ 22.5.2018 Tags: ချင်း Related posts နိုလှိုင်း ● ကိုးဆယ်ခုနှစ်က လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်များ (0) နိုင်ဝင်းသီ – လွင့်​​မျောတ​စ္ဆေ (0) နိုင်ငံတကာသာဂိ – Facebook ဖေ့စ်ဘွတ် ထူထောင်သူ၊ သုံးစွဲသူ၊ အမြတ်ထုတ်သူ နဲ့ အကျိူးစီးပွား (0) မြတ်စံ – ကျနော်နဲ့ မိုဟာမက်အာကြီး (0) မြတ်စံ –...
ချင်းတွင်း မဂ္ဂဇင်း မိုးရေစက်နဲ့အတူ ပြန်ထွက်လာတော့မယ် K (မိုးမခ) မေ ၃၁၊ ၂၀၁၈ စာပေမဂ္ဂဇင်းတစောင်ဖြစ်တဲ့ ချင်းတွင်းမဂ္ဂဇင်း အတန်ကြာရပ်နားထားရမှ ယခု ဇွန်၊ ဇူလိုင်အမီ ၂လ တကြိမ် ပြန်လည် ထုတ်ဝေသွားတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ ယခုပြန်လည်ထုတ်ဝေသွားမယ့်ချင်းတွင်းမဂ္ဂဇင်းမှာ စာမူလက်ရာများကို ယခင်ထုတ်ခဲ့တဲ့မူပုံစံအတိုင်းပဲ ထည့်သွင်းဖော်ပြ သွားမယ်လို့သိရပြီး အယ်ဒီတာများကတော့ အတိုင်ပင်ခံ- ကိုတာ၊ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာများကတော့ ဒေါက်တာမြင့်ဇော်၊ ဥာဏ်သာဇော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်လည်ထုတ်ဝေမယ့် ချင်းတွင်းမဂ္ဂဇင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ခံအယ်ဒီတာတဦးဖြစ်တဲ့ ဥာဏ်သာဇော်က “ယခင် ကလောင်တွေကိုအားပြုပြီး အသစ်တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားမယ်၊ ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ၊ တွေးစရာတွေလည်း ပါအောင် ကြိုးစားသွားပါမယ်”လို့ ပြောပြပါတယ်။ ယခုပြန်ထွက်မယ့် ချင်းတွင်းမဂ္ဂဇင်းမှာလည်း ကဗျာ၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါး၊ ဘာသာပြန်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ...
မိုးမိုးစံ ● ဘာသာပြန် အေးရိပ်မွန် (မိုးမခ) မေ ၃၀၊ ၂၀၁၈ သိပါသလား …. တက္ကသိုလ်ဘာသာပြန်နှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးဌာနကို အများသိမယ်မထင်ပါ၊ တက္ကသိုလ်ဘာသာပြန်နှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးဌာနလေးအကြောင်းကို ကျမ သိသမျှနဲ့ တွေးမိသမျှလေး ရေးပြချင်ပါတယ်။ မှားတာရှိထောက်ပြ၊ လိုအပ်တာရှိဖြည့်စွက်၊ ရေးချင်တာလေးရှိရင် ရေးပေးကြဖို့လည်း မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ဒီဌာနလေးကို သိစေချင်တယ်၊ စိတ်ဝင်စားစေချင်တယ်၊ ပြီးတော့ ဒီဌာနလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည်ပညာရေးကို နည်းနည်းကနေ များများစဉ်းစားမိကြဖို့ကျမ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးမိပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ဘာသာပြန်နှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးဌာနဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ စတင်တည်ရှိလာတာ ယခုလာမယ့် သောကြာ ဇွန်လ (၁) ရက်၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်မှာ သက်တမ်း အနှစ် (၇ဝ) ပြည့်လာပါပြီ။ အဲဒီ ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့မှာ ဒီဌာနလေးမှာ...
ကာတွန်း နေလင်းအောင် (မန်း) ရဲ့ လေလုံးကြီးပါလား … (မိုးမခ) မေ ၃၀၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း နေလင်းအောင် (မန်း) Related posts ကာတွန်း နေလင်းအောင် (မန်း) ● ဝါသနာ … (0) ကာတွန်း နေလင်းအောင် (မန်း) ● ရှိတာအကုန်ထုတ်စမ်း … (0) ကာတွန်း နေလင်းအောင် (မန်း) ● မတူတာ ပေါင်းလုပ်ရအောင် (0) ကာတွန်း နေလင်းအောင် (မန်း) ● ပညာရှိတို့မည်သည် … (0) ကာတွန်း နေလင်းအောင် (မန်း) ● ကျွဲတော့ ကျွဲပဲ … ဒါပေမယ့် ကျွဲ (0)
ကိုသန်းလွင် ● အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း (မိုးမခ) မေ ၃၀၊ ၂၀၁၈ (၁) မမျှော်လင့်ဘဲ ကျွန်တော်ကြီးပြင်းခဲ့ရာ ကျွန်တော့်ဇာတိအရပ်မှ အိမ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါသည်။ သည် အိမ်ကို မရောက်ဖြစ်သည်မှာ လေး ငါးနှစ်ရှိတော့မည်။ သည်အိမ်ကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်က အမေဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်မှာနေသူ မရှိ၊ အဖက်ဖက်က ပျက်စီးနေသည်။ အိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ တူမတယောက်ကို တာဝန်ပေးထားသော်လည်း သူ့အိမ်ထောင် တဖက်နှင့် အချိန်အားမရနိုင်ဘဲ အိမ်ကိုသေချာ မကြည့်ရှုနိုင်ပါ၊ အိမ်က သစ်သားတိုင်နှင့် အုတ်နှင့် ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ရာ ကျွန်တော်တို့အညာရပ်က ဤအိမ်မျိုးကို နံကပ်တိုက်ဟုခေါ်ကြသည်။ အိမ်မှာဆေးသုတ်ထားသော်လည်း ဆေးတွေက အလိပ်လိုက်ကွာကျနေသည်။ တချို့နေရာတွေ မှာ ဆေးရောင်မရှိတော့။ အိမ်ရှေ့က ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိုက်ခဲ့သောသီးပင်မှာ အုပ်အုပ်ညို့ညို့နှင့် အရွက်တွေ ဖားဖားကျနေသည်။ ကျွန်တော်ငယ် ငယ်က...
မောင်လူပေ ● ကျွန်တော့်ဆရာ ကလေးတွေအကြောင်း (မိုးမခ) မေ ၃၀၊ ၂၀၁၈ မောင်လူပေဟာ ညံ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ ကောင်းတာလေးတွေတွေ့ရင် သင်ယူပါတယ်။ နာယူစရာ ရှိရင် နာယူပါတယ်။ ကိုယ့်ဆရာသမားတွေကိုလည်း အမြဲအမှတ်ရနေပါတယ်။ ငယ်ငယ်ထဲက သင်နေရတာ အခုအရွယ်ထိ သင်ယူမဆုံး။ လေ့လာမဆုံး။ မူကြိုအဆင့်လောက်တော့ တတ်ပြီလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ထင်နေတာ၊ မူကြိုအဆင့်တောင်မရောက်သေးဘူးလို့ ဒီနေ့မှ သတိပြုမိတော့တယ်။ အလုပ်ကအပြန် မောမောနဲ့ အိမ်နဲ့မနီးမဝေးက အပန်းဖြေစရာပန်းခြံလေးထဲဝင်မိတယ်။ အရိပ်ကောင်းတဲ့ခုံလေးမှာထိုင်။ ကန်ရေကိုဖြတ်တိုက်လာတဲ့လေနုအေးကိုရှုရင်းနဲ့ ဇိမ်ကြနေတာ။ ရာသီဥတုကလည်းပူသကိုး။ အနားမှာ ကလေးအသံတွေ ဆူညံနေတာကို ပထမပိုင်းမှာသတိမပြုမိသေးဘူး။ အမောပြေလောက်ချိန်မှ သတိပြုမိတယ်။ ကိုယ်ထိုင်နေတာ ကလေး ကစားကွင်းနားက ထိုင်ခုံမို့ ကလေးတွေဆော့ကစားနေတာလည်း အတိုင်းသားမြင်နေရတယ်။ ကလေးကစားကွင်းလေးက အသစ်လေးဖြစ်လို့။ အရင်အဟောင်းတွေကိုအကုန်ဖြုတ်ပြီး အသစ်လဲထားတော့...
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ပိုင်ရှင်မဲ့နေဆဲ …. (မိုးမခ) မေ ၃၀၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း OKKW Related posts ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ခေတ်နှစ်ခေတ် (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဘတို့ ဆေးရုံ (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဖျားရှူးနေတယ် … (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ မိုက်တယ် … မိုက်တယ် … မိုက်ဆဲ … (0) ကာတွန်း okkw ရဲ့ တာဝန် (0)
ဆည်းဆာရိပ် ဘိုးဘွားရိပ်သာအတွက် ရန်ပုံငွေတေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ ပြုလုပ်မယ် K (မိုးမခ) မေ ၃၀၊ ၂၀၁၈ စာရေးဆရာမ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသော ဆည်းဆာရိပ် ဂီလာနဘိုးဘွားရိပ်သာနှင့် အနုပညာ ဆည်းဆာရိပ်အတွက် ရန်ပုံငွေတေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းရှိ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ဇွန်လ ၂ရက်နေ့ ည ၆နာရီမှ ၁၁နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ရန်ပုံငွေတေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ အနုပညာရှင်များက မိမိတို့တတ်စွမ်းသော အနုပညာဖြင့် သီဆိုဖျော်ဖြေကာ အလှူခံပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ပါဝင်ဖျော်ဖြေပေးကြမယ့်အနုပညာရှင်များကတော့ စိန်ဝင်းထွန်း၊ ဂျော်နီ၊ မိုးမိုး၊ စစ်သွေး၊ ဇွဲပြည့်၊ စိန်လင်း၊ မင်းခေတ်မင်း၊ ထွန်းကိုကို၊ သားငယ်၊ ရတနာမိုင်၊ အေသင်ချိုဆွေ၊ ချမ်းချမ်း၊ ဆုပန်ထွာ၊ ပိုပို၊ နန်းခင်ဇေယျာ၊ ယွန်း၊ ပွင့်၊ ဘီလီလမင်းအေး၊ ပိုးမီ၊...
ကို ထ က် –ရေ ဦး- မိုးပေါ်ကျ ငရဲသား
မိုးပေါ်ကျ ငရဲသား ကို ထ က် –ရေ ဦး(မိုးမခ) မေ ၂၈၊ ၂၀၁၈ တနေ့သားမှာပေါ့အော်သံတွေဆူညံနေချိန် ဘယ်ကပစ်ထည့်လိုက်မှန်းမသိလိုက်ရတဲ့အရှိန်နဲ့ ဘာမသိညာမသိ ဘယ်မသိညာမသိ ဘာဆိုဘာမှမသိတဲ့ ငရဲသားဟာဘွားခနဲကျလာခဲ့တယ် မိုးပေါ်ကနေ လက်မှာလက်ဆွဲအိတ်အနက်ကလေးတင်းတင်းဆွဲလို့ ပခုံးမှာချိတ်လာတဲ့ရွှေကလက်အရောင်လေးပြူးပြဲပြလို့ အားလုံးသတိပါဆိုလားခပ်မာမာအသံထုတ်ပြလို့ ညစ်ပေမှုန်မှိုင်းမျက်နှာပေးမှာ ထီမထင်အချက်ပြနဲ့ အခန်းထဲခုမှရောက်လာတဲ့ငရဲသားဟာ အဲဒီလိုအထာ။ ရောက်ရောက်ခြင်းစောက်နဲ့ထွင်းတယ်ဆိုသလို လက်နှစ်ဖက်နောက်ပစ်လို့အခန်းထဲဝင်တဲ့ ငရဲသား ခါးကိုသေချာမတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုဖာကိုတချက်ဝေ့ကြည့်ပြီး နောက်တော့သွားရည်တမျှားမျှားနဲ့တော်ကီပွားတော့တာပါပဲ မင်းတို့တွေကောင်းကောင်းလုပ်မင်းတို့တွေကောင်းကောင်းနာခံ မင်းတို့တွေရဲ့အချက်အလက်နဲ့မင်းတို့တွေရဲ့အသက် လက်မှတ်တချက်ထိုးလိုက်တာနဲ့ပျက်သွားမယ်နားလည် ပြန်ပြောရင်ခံ ပြန်မပြောရင်စံရမယ် မှတ်ထား မှတ်ထား ပြောပြီးတော့ ဖွီးခနဲဟပ်ထုတ်လိုက်တယ်အပုပ်နံ့တွေ။ နောက်တော့ ရေကိုသောက်တယ် နောက်တော့ ရုတ်တရက်လေပွေမွှေ့လိုက်သလိုငရဲသားဟာ ဘောင်းဘီကြားထိုးထည့်လာတဲ့စာအုပ်ကလေးဖွင့် ကမ္ဘာကြီးမီးလောက်တာထက်ပိုစိုးသလိုအရေးတကြီး တွေ့သမျှရေးမှတ်နေတော့တာပါပဲ အဟောင်းအမြင်းတွေ အကျိုးအပဲ့တွေနဲ့ အမှိုက်စတွေ ပြီးတော့ ခေါက်ရိုးကျိုးဆွေးမြည့်နေတဲ့အယူအဆတွေ...
ဂျူနီယာဝင်း – အမေရိကားက စာမတတ်သူ ပပျောက်ရေး အတွေးအမြင်မဂ္ဂဇင်း၊ ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၀၁၈ ထုတ်မှ။ (မိုးမခ) မေ ၂၉ ၊ ၂၀၁၈ (1994 April ထုတ် American Mosaic စာစောင်မှာ ဖတ်လုိုက်ရတဲ့ This is America, Adult Literacy ဆုိုတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကုို ဘာသာပြန်တင်ဆက်လုိုက်ပါတယ်။ အဲသည်စာစောင်မှာ စာရေးတဲ့သူအမည်တွေ ဖော်ပြမထားပါဘူး။ အများအားဖြင့် လူထုကြား ပတ်သတ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာများကုို ဦးစားပေးထားတာကြောင့် စာရေးသူအမည် ဖော်ပြဖို့ မလုိုအပ်ဖူးလုို့ ယူဆထားလုို့ ထင်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သံရုံးကနေ သတင်းအချက်အလက်ဆုိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာက ရေးသား ထုတ်ဝေမှု စာစောင်တွေဆုိုပါတော့။ ဒါ့အပြင် ၂၀၁၇ခုနှစ် Adult Literacy ပရုိုဂရမ်ရလဒ်အကျဉ်းကုို...
ယနေ့ မြန်မာ့သဘင်ရှုခင်း (၂၀၁၈) တွေ့ဆုံပွဲ ဇွန်လ ၂ ရက်ပြုလုပ်မယ် K (မိုးမခ) မေ ၂၉ ၊ ၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံသဘင်ဖောင်ဒေးရှင်းမှဦးစီးကျင်းပတဲ့ ယနေ့ မြန်မာ့သဘင်ရှုခင်း (၂၀၁၈) အမည်ရတဲ့ သဘင်ပညာရှင်များ၊ ယနေ့သဘင်လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကို ဇွန်လ၂ရက် နေ့၊ နေ့လယ်၂နာရီ၊ ရန်ကုန်မြို့ Sule Shangrila Hotel မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသဘင်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ (၃) နှစ်ကျော်သက်တမ်းကာလအတွင်း သဘင်လောကအကျိုး၊ မိမိနိုင်ငံအကျိုး စွမ်းဆောင်သယ်ပိုးနိုင်ခဲ့သမျှကို ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ မြန်မာ့သဘင်လောကရဲ့ သမိုင်းတန်ဘိုးနဲ့တကွ မျက်မှောက်ခေတ်သဘင်လောကအရွေ့များ၊ ဂေဇက်ဝင်ပွဲတော်များရဲ့အခြေအနေ မြန်မာ့သဘင် စင်မြင့်လို့ခေါ်ကြတဲ့ဇာတ်ခုံတွေပေါ်မှာ “ဆိုငိုပြော” ဇာတ်သဘင်ပညာများ ရှားပါးတိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်လာခြင်း၊ ဇာတ် အဖွဲ့၊ ဆိုင်းအဖွဲ့များ ခေတ်အမြင်အတွေး ခေတ်သစ်နည်းပညာများနဲ့ ရိုးရာသဘင်ကို မြှင့်တင်ကြရန် အရိုးကို အရွက်မဖုံး...
ကာတွန်း ပံသုအောင်ရဲ့ ဖြေးဖြေး … မေမေ … (မိုးမခ) မေ ၂၉၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ပံသုအောင် Related posts No related posts.
မောင်မောင်စိုး ● ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် တပ်မတော်သဘောထား (မိုးမခ) မေ ၂၉၊ ၂၀၁၈ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့သော မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် ယခုအခါတွင် ရပ်တန့်နေသည်။ ရှေ့မတိုးသာ နောက် မဆုတ်သာအခြေအနေတွင် ဆိုက်ရောက်နေသည်ဟူ၍ သုံးသပ်ပြောဆိုနေသည်ကို တွေ့ရပေသည်။ အမှန်တကယ်လည်း လက်တွေ့အခြေအနေတွင် မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးသည် မြန်မာပြည်စစ်မီးလျံများကြား လူးလွန့်အသက်ဆက်နေရသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ရှေ့မဆက်နိုင်ခြင်းနှင့် စစ်ပွဲများ ပိုမိုပြင်းထန်လာခြင်းသည် နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကြာ အသားကျနေသည့် စဉ်းစားမှုများအပြင် လက်တွေ့အခြေအနေကို ကြည့်မြင်သုံးသပ်ပုံများကွဲပြား၍ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရမည်။ လက်ရှိမြန်မာပြည်ငြိမ်း ချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် တပ်မတော်၏သဘောထားသည် အရေးပါသည်ကို ငြင်းပယ်၍မရပေ။ သို့ဖြစ်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း စဉ်တွင် တပ်မတော်၏သဘောထားကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် NCA နှင့်ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားခဲ့ကြသည်ဆိုသော်လည်း တကယ်...
တေရသမ အကြိမ်မြောက် ရွှေအမြုတေ စာပေဆုပေးပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ K (မိုးမခ) မေ ၂၈၊ ၂၀၁၈ (၁၃) ကြိမ်မြောက် ရွှေအမြုတေစာပေဆုပေးပွဲကို မေလ ၂၆ ရက် (စနေနေ့) ညနေ ၆ နာရီမှာ ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းမှာရှိ တဲ့ တော်ဝင်ဂါးဒင်းဟော်တယ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရွှေအမြုတေစာပေဆုပေးပွဲကို ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်းနဲ့ ရွှေအမြုတေစာပေဆုတို့ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင် ဆရာဦးဝင်းငြိမ်း ရဲ့ ၇၂ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲနဲ့အတူ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပခဲ့တာ ဒီနှစ်ဆိုရင် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် ဇွန်လကနေ နောက်နှစ် မေလ ဆယ့်နှစ်လတာအတွင်း ထွက်သမျှ မဂ္ဂဇင်းတွေထဲကမှ ရွေးချယ်ပြီး ကဗျာဆု၊ ဆောင်းပါးဆု၊ ရသစာတမ်းဆု၊ မျိုးဆက်သစ်စာပေဆု၊ ဝတ္ထုတိုဆု၊ မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုရှည်ဆု (စ/ဆုံး)...
လင်းသစ်နီ ● နောင်​တမဲ့ နိုင်​ငံ​တော်​ (မိုးမခ) မေ ၂၈၊ ၂၀၁၈ ​ယင်​​ကောင်​​တွေက ခေါင်းမှာတဝီဝီနဲ့ အစာအိမ်​ထဲအ​လောင်းက အလည်​လွန်​ဆဲပဲ ချွတ်​ခနဲအသံကြားလို့ ဆယ်​စုနှစ်​တချို့နောက်​ပြန်​ဆုတ်​ကြည့်​​တော့ အ​လောင်းက အ​ခေါင်းထဲမရှိဘူး အပုတ်​နံ့မကုန်​​သေးတဲ့ဦး​နှောက်​ရဲ့မီး​တောက်​​က နှလုံးသားထဲ သံ​စုံမြည်​တယ်​ ကျကွဲ​တော့မဲ့ နိုင်​ငံ​ရေးအခင်းအကျင်း ဆတ်​ဆတ်​ထိမခံနိုင်​တဲ့ ဘာသာ​ရေးလိုအပ်​ချက်​ လဲကျ​သူကို ကူသူမရှိ​နေ့ရက်​များ လူထူထူထဲ​ရောက်​​တော့ အားလုံးဟာ​ ပျောက်​ရှသွားတဲ့တ​စ္ဆေ​တွေ ဘယ်​​လောက်​​တောင်​များ​နေမလဲ လမ်းကို​လျှောက်​​တော့ ​နောင်​တ​တွေက အရင်​​ရောက်​လို့ ပြီး​တော့လည်း ပစ်​ချလိုက်​ကြတာပါပဲ ပြန်​​ကွေ့လာတဲ့​လေယာဉ်​က ​တောင်​ပံတဖက်​ပါမလာ​တဲ့စကားလုံး​တွေလား ထစ်​ခနဲဆို ​သေ​နေတဲ့အ​လောင်း​တောင်​ ထွက်​​ပြေး​နေရတဲ့နိုင်​ငံ​တော်​ကို အ​ခေါင်းထဲကလှမ်း​မျှော်​ကြည့်​​တော့ ဘိန်းမုန့်တချပ်​ကို တစ်​​ယောက်​တဝက်​မစားနိုင်​​သေး​ဘူး ဒါ​တောင်​ နှလုံးသားထဲ ဘုရားတည်​မလို့​တဲ့ ဦး​နှောက်​က ကိန်းခန်းကြီးချင်​​နေတာ မျက်​ကန်းတ​စ္ဆေမ​ကြောက်​မို့ ကျ​နော်​တို့​စောင့်​ရတာလည်း ဒူး​တွေ​ကတောင့်​လို့ စစ်​ဖိနပ်​သံ​တွေက အိမ်​မပြန်​ကြ​​​တော့ဘူးလား ​မေးမရဘူး ဘယ်​နားက...
Page5of 902«1...34567...902»
>Vote No MTV 02
>First week of June2010 - FFSS Yangon Activity
>Cartoon Beruma - Swine Flu Advantage
>ူမန်မာသံအမတ်အသစ် အဆိုပခြဵက် အင်ဒိုနီးရြားလတ်ြတော်ပယ်ခဵ